Sawirada dheddigga oo buuxiya waddooyinka iyo shabakadaha farriimaha ay wataan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sawirada dheddigga ah ee buuxiya waddooyinka iyo shabakadaha farriimaha ay wataan
Iris Gamen | 29/03/2022 22:12 | Dhiirrigelinta
8-dii Maarso, ayaa Maalinta Haweenka Adduunka; halkaas oo qaar badan oo ka mid ah ay isugu soo baxeen waddooyinka si aad u dalbato ma aha oo kaliya sinnaanta dhaqaalaha, dhaqanka iyo siyaasadda, laakiin sidoo kale sinaanta bulshada. Si ay kor ugu qaadaan codkooda, kuwa aan awoodin, inay sheegaan inay halkaas joogaan, oo ka soo horjeeda dhammaan dhibaatooyinka iyo in aysan doonayn inay aamusaan.
La muuqaalka dhaqdhaqaaqa dheddigga, aad bay muhiim u tahay in la siiyo codka dhammaan arrimaha khuseeya taas oo la xiriirta dumarka. 8-da Maarso, waa maalin aan arki karno sida farshaxanka loo isticmaalo in baalasha la siiyo dhaqdhaqaaqa haweenka.
Waa tan maanta aan ka hadli doono, sawirada dumarka, kuwaas oo u adeegay gudbinta fariimaha aadka muhiimka u ah bulshada, ma aha dadka oo kaliya, laakiin madaxda sare ee dalalka. Intaa waxaa dheer, waxaan magacaabi doonaa sawir-qaadayaasha haweenka ee ay tahay inaad ogaato oo aad haysato tixraac ahaan.
1 sawirada dumarka
2 Sawir-qaadayaasha Feminist waa inaad ogaataa
2.3 tuulada casriga ah
2.4 Muuska Flavite
La xaq u yeelashada xuquuqda haweenka, waxaa loo qaadi karaa oo loo sheegi karaa siyaabo kala duwan, iyada oo loo marayo taxane, filimaan, sawirro, muusig, dhar, iwm. Qaybtan, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah sawirada dumarka ugu fiican oo aadan seegi karin.
Dumarku waa lagama maarmaan ayuu noo sheegay Patricia Bolaños oo ku jirta sawirkan oo leh astaanta astaanta u ah feedh la isku dheggan yahay. Adiguna waad ku saxan tahay hadalkan, dumarku waa lama huraan, dumarku way is taageeraan, is-dhiijiyaan, isu gargaaraan, baalasheenna furaan cid aan joojinaynna ma jirto.
en el Dhaqdhaqaaqa dumarka dhammaanteen waan ku habboonnahay waana la dagaallanaa, dhinacba dhinac. Dagaalku wuu sii socdaa, sababtoo ah weli waxaa dhiman waddo dheer. Sida aan ku arki karno sawiradan Amelie Torres, Be Fernández, iyo Ana Jarén, iyo kuwo kale, in dareenka halganka iyo midowga dumarku dhaqaaqo.
Sawirro badan oo aan ka helno shabakadaha bulshada ama xitaa bandhigyada 8M waxay isticmaalaan kaftan iyo kaftan qaab isgaarsiineed. iyo in la muujiyo khilaafaadyada dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka xaaladaha qaarkood ee nolosha.
Waxaan kaaga tagnay qaar ka mid ah tusaalooyinka aadka loo wadaago ee shabakadaha, bahalkii spaghetti, Rocío Salazar, Arte Mapache, iyo Clarilou, iyo sawir-qaadayaal kale oo badan.
Ma iloobi karno tusaalayaashaas fariimaha tooska ah u ah bulshada aan ku dhex nool nahay, laga yaabee inaysan ka soo jeedin sawir-qaadayaal aan ogaan karno, sababtoo ah waa hal-abuur shakhsi ahaaneed, laakiin farriintu aad bay u caddahay, ixtiraamka dhammaanteen, oo leh hal waddo oo la raaco, dagaalka sinaanta.
Hermione sawirka dumarka
Tusaale ahaan, maanta dagaallama yaanad dhiman berrito
Sawir-qaadayaasha Feminist waa inaad ogaataa
Haddii aan bilowno aruurinta mid kasta oo ka mid ah sawirada dumarka ee sheeganaya 8M, waligeen ma dhamaaneyno, taasina waa calaamad wanaagsan. Qaybtan, waxaanu ku soo ururin doonaa qaar ka mid ah sawir-qaadayaasha kuwaas oo ka shaqeeya dumarnimada iyaga oo adeegsanaya shaqadooda.
Fanaanka Raquel Riba, waa kan waxay siisay nolosha dabeecadda Lola Vendetta, haweeney awood leh. Sawir-qaade Catalan waa aasaasihii ReEvolución Feminina, dhaqdhaqaaq ujeedadiisu tahay in la siiyo haweenka booska ay u qalmaan bulshada dhexdeeda.
Tusaalooyinka uu, waxaan ka heli Vignettes taas oo ay u dagaalanto sinnaanta haweenka iyada oo loo marayo sawirro khad fiican iyo fariimo xoog leh.
Jone Bengoa, naag yaa waxay taageertaa dhaqdhaqaaqa dheddigga, la dagaallama aabbanimada iyo jebinta canons-ka lagu soo rogay bulshada oo aan ku noolnahay. Waxay difaacday fikradda ah in haweenku ay xor u yihiin inay go'aanadooda qaataan.
Dhammaan fariimahan waxaa lagu siidaayay shaqooyinkiisa oo lagu soo aruuriyay akoonkiisa Instagram, sastraka, Erayga Basque loo isticmaalo in lagu tilmaamo haramaha. Fikirkan ayay u rogtay isagoo difaacay in cawskaasi ay ku dhashaan meel iyo waqti ay ku jabaan waxa la calaamadeeyay, in la jebiyo xeerar.
tuulada casriga ah
Raquel Corcoles waa fannaanka ka dambeeya Moderna de pueblo. Qoraalada ku jira akoonkaaga Instagram-ka, sawir-qaade wuxuu adeegsadaa sawirradeeda si uu codka u siiyo dhaqdhaqaaqa dheddigga, isagoo had iyo jeer ku ciyaaraya kaftan.
In uu Buugga, Idiotized: A Tale of EmpowerFairies, waxa ay ina tusinaysaa wejiga jilayaasha ay ku nool yihiin magaalada aad ka maqasho weedho la mid ah, taas oo aan ahayn mid lagu yaqaan gabadh yar ama maalinta aad guursato ayaa noqon doonta tan ugu farxadda badan noloshaada. Marka ay u guuraan magaalada weyn, waxay la kulmaan kuwa kale jilayaasha ka dhigaya inay indhahooda furaan oo bilaabaan inay bartaan waxa ay runtii u qalmaan.
Sawir-qaade Isbaanish ah, sawir-gacmeed iyo sawir-qaade, Flavia Álvarez Pedrosa, oo loo yaqaan Flavita Banana. Mid ka mid ah sawir-qaadayaasha ugu saamaynta badan dalkeena.
Iyada oo leh sawirradeeda muuqaal madow oo dabacsan, Waxay nooga hadlaan mowduucyo ay ka mid yihiin jacaylka, murugada, iskudhafka, raaxo la'aanta bulshada, iwm.. Aragtida uu ka leeyahay adduunka iyo sida uu ugu gudbiyo kaftanka ma jirto cid aan dan ka lahayn.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa Isabel Ruiz, sawir-qaadaha iyo qoraaga suugaanta carruurta iyo dhallinyarada labadaba, iyada oo ujeedadu tahay siinta codka iyo muuqaalka muuqaalka haweenka. Daabacaadiisa, Mujeres, oo ka kooban shan nuqul, wuxuu ammaanay jilayaasha dumarka ah ee calaamadeeyay waqtiyo muhiim ah taariikhda.
Koontadiisa Instagram-ka, waxaad ka heli doontaa sawiro xambaarsan fariin aargoosi ah oo ku saabsan sawirka dumarka. Iyada oo leh qaab sawireed midabo leh, is dhiibid iyo dheddig. Caalamka is beddela, marmar midabyo pastel ah, marar kale fluorine, dhaldhalaalka ama goobaha dhimirka.
iyada, shaqada fanku waa ka muhimsan tahay fannaanka ka dambeeya., maadaama ay la socoto shaqada in daawadayaasha ay abuuraan xiriir.
Iyadoo loo marayo Isticmaalka birta ah, Rocío Salazar, wuxuu la xidhiidhaa oo siiyaa muuqaal dhibaatooyinka ay haween badani la kulmaan.. Farshaxankan, ma jiro hal tusaale oo keliya oo naag ah, iyada dhammaantood waa ansax.
Waxay ku bilaabatay sawirro muujinaya go'aanka haweenka ee ah in aan la xiirin, halkaasna waxaa ka kacay kuwo badan. Sawirro aad u wanaagsan oo ay heleen taageerayaashiisa shabakadaha bulshada.
Beenta loogu talagalay haweeneyda dhabta ah, waa mid ka mid ah buugaaggeeda, halkaasoo ay si la yaab leh uga hadasho jacaylka jacaylka ah, kaas oo dhammaan dumarka loo maleynayo inay hadaf ka leeyihiin nolosha. Waxayna si cad u cadaysay, Dumarka oo dhami kuma gartaan fikradda jinsiga oo waxay raacaan xeerarka bulsheed ee la soo rogay.
Kuwani waa dhawr tusaale oo ka mid ah dhammaan farshaxanka ku saabsan dhaqdhaqaaqa dumarka ee nagu wareegsan, laakiin aad u badan shabakadaha bulshada sida Instagram. yihiin shaqadu waxay ururinaysaa fariimaha walaaltinimada, halganka, xorriyadda iyo dhiirigelinta kacaanka hadda socda; Dumar la'aan, dunidu way istaagtaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sawirada dheddigga ah ee buuxiya waddooyinka iyo shabakadaha farriimaha ay wataan
Dejinta burushka Sawir-qaade bilaash ah